TSY TAN-DALANA NY FILOHA RATSIRAKA.
Mitsanga-menatra eo anatrehan’izao tontolo izao ny Firenena Malagasy nohon’ny fanosihosena ny Demokrasia sy ny lalam-panorenana ataon’ny Filoha Didier RATSIRAKA. Tsy mbola nisy firenena manana ny fiandrianam-pireneny ka ny miaramilany ihany no sahy manitsakitsaka ny sainam-pireneny, mandaka sy manositosika Olomboafidim-bahoaka mitondra samboady. Ny Prezidan’i Repoblika no Filoha faratampon’io Tafika mahavanon-doza io araka ny andininy faha 55 amin’ny lalàm-panorenana.
Tsy ny andininy faha 10 amin’io lalàm-panorenana io ihany koa ve no miaro ny fahalalahana miteny sy mamosa-kevitra, ny fahalalam-baovao, ny fivoriana, ny fivezivezena ary ny finoana nefa sakananana ny famoriam-bahoaka ataon’ny Depiote olona voafidy ara-dalàna ary nogadraina aza ny Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena VONINAHITSY Jean Eugène teo am-panatanterahana ny asany araky ny andininy faha 69 rehefa nitsikera ny Filoha RATSIRAKA tamin’ny raharaha Tetezana mitsingevana ao Ivoloina. Ho toy inona ny hanjo ny olon-tsotra raha hanakiana indray ny Aferabe ateraky ny fividianana solomaso ho amin’ny fanakona-masoandro (37,5 milliards de FMG) ho fanohizan’ny Prezidan’ny Repoblika ny fitadiavam-bola ho an’ny fianakaviany sy ny olona manodidina toy ny tamin’ny Valala sy ny Cholérà ?
Moa ve tsy zon’ny Vahoaka intsony ny mahalala vaovao sy fisehoan-javatra eto amin’ny firenena araka ny andininy faha 11 amin’ny lalàm-panorenana no atositosika sy torahana grenady mandatsa-dranomaso izy ireo rehefa manatrika ny famoriam-bahoaka ataon’ny Solombavambahoakan’i Madagasikara ?
Eken’ny mpiara-monina maro eto amintsika ho tantara sy soatoavina manan-kasina ny 29 Marsa ary mbola izy Didier RATSIRAKA ihany no namoaka didim-panjakàna nanamafy izany tamin’ny fotoana niakarany teo am’ny Fitondrana fa atambatra ankalazaina amin’ny vaninandron’ny 29 Marsa ny fahatsiarovana ny raharaha rehetra nitory fitiavan-tanindrazana nisy teto amin’ny firenena : Menalamba, VVS, Ralaimongo, 1 Avrily 1971, 13 May 1972. Koa nahoana no torahana grenady ireo olona mba hankalaza izany teo amin’ny Kianja manan-tantara 13 May tamin’ny 29 Marsa 2001, eninambiroampolo taona (26) taorian’ny namoahany io didim-panjakàna io ?
Fa angaha misy lapam-panjakana na lapan’ny Praiministra na lapan’ny tanàna eo amin’io toerana io no arovana mafy tahak’io ? Nahoana ny teny amin’ny Mausolée sy Ambohijatovo nanaovana fihetsehana tsy nisy arakaraka ary nisy akory aza ny vely amponga sy totorebika mikasika ity andro maloky ny 29 Marsa ity ? Ny mpanatitra voninkazo nilahatra am-pilaminana avy eny Soarana ho eny Ambohijatovo notarihin’ny Cellule de Crise dia nosakanan’ny miaramila rehefa nandalo ny Kianjan’ny 13 Mai ka noveleziny sy nofafazany grenady mandatsa-dranomaso ?
Fanosihosena ny zon’ny Antenimieram-pirenena maha andrim-panjakana azy sy ny Solombavambahoaka no ilàn’ny Filoha RATSIRAKA laza eran’izao tontolo izao ary nohitsakitsahin’ny andininy faha 44 amin’ny lalàm-panorenana izay milaza fa andraikiny ny miantoka ny fampandehanana antsakany sy andavany ny fahefana rehetra eto amin’ny Firenena.
Ny andiny faha 152 amin’ny lalàm-panorenana dia milaza fa tsy azo ampiharina ny lalàna mifandàka amin’ny lalàna fototry ny Repoblikan’i Madagasikara. Anisan’izany ny hitsivolana 60-082 tamin’ny 13 aogositra 1960 sy 60-104 tamin’ny 21 septambra 1960 izay arangaragan’ny Préfet de Police rehefa misy famoriam-bahoaka ataon’ny Depiote. Samy miara-mahita isika fa anariana ranon-tany avy amin’ny fanamboaran-dalana ankehitriny ny eo Antanimbarinandriana rehefa niangonan’ny fako sy loto tamin’ny fotoam-pahavaratra. Mba toerana mendrika ny mponin’Antananarivo anisan’ny vahoaka andriamanjaka tompon’ny fahefana rehetra araka ny andininy faha 6 amin’ny lalàm-panorenana ve io toerana io ? Tsy mendrika AZY io toerana fanariam-pako sahala amin’io hoy ny fihevitry ny Solombavambahoaka ao amin’ny Cellule de Crise. Asa izay fihevitry ny Ben’ny Tanàna ny amin’izany ! Ny fangatahana an’Ambohijatovo rehetra taorian’ny 09 Fevrie 2001 dia nolavin’ny Ben’ny Tanàna daholo.
Ny Prezidan’ny Repoblika no Filoha mpanorina ny AREMA ary ny AREMA no mifanandrina amin’ny vahoaka tarihin’ny Cellule de Crise amin’ity resaka Kianjan’ny 13 Mai ity. Fa angaha AREMA ny Miaramila sy ny Préfet de Police ary ny Ben’ny Tanàna no miditra amin’ity resaka politika ifanoheran’ny Mpanohitra amin’ny Antoko AREMA ity ?
Ny Mponin’Antananarivo dia efa mandoa hetra ho enti-manana ny filaminana, ny fikarakarana ary fanatsarana ny Tanàna nefa potika ny lalàna, tsy tafavoaka ny rano maloto ary miavosa ny loto manamaimbo ny Tanàna eto an-drenivohitra. Ka inona amin’ireo no arovan’ny Préfet de Police sy ny Ben’ny Tanàna ?
Malaza manerana an’izao tontolo izao ny fanosihosena andrim-panjakana sy ny zon’ny Solombavambahoaka ataon’ny Filoha RATSIRAKA.
Koa manainga ny Vahoaka Malagasy tsy HANAIKY LEMBENANA manana ny RARINY hiaro ny DEMOKRASIA sy ny ZON’OLOMBELONA ny Cellule de Crise.
Antananarivo ny 3 Avrily 2001